Baiko ho an'ny maherin'ny 100 tapitrisa Aion Bionic ho an'ny iPhone 15 | Vaovao IPhone
ny sasany Ny loharanom-baovao akaiky ny TSMC dia nanondro fa ny orinasa Cupertino dia tokony hanafatra Chips mihoatra ny 100 tapitrisa avy amin'ny 15 Bionic ho an'ny fitaovanao iPhone 13. Ireo iPhones vaovao ireo dia heverina fa havoaka amin'ny volana septambra ho avy izao ka azo inoana fa tena marina tokoa io fangatahana chips io.
Angamba ity processeur ity dia hampidirina ao amin'ireo maodely mini iPad andrasana amin'ny faran'ity taona ity, ka ny fangatahana dia tsy maintsy avo dia avo hamaly ny filan'i Apple. Amin'io lafiny io, ny mazava amintsika dia ny iPhone manaraka dia tsy maintsy manana tahiry mpanodinana ampy.
Avo ny vinavinan'ny mpivarotra an'ireny maodely iPhone vaovao ireny, ka izany no antenaina hamokarana iPhone sahabo ho 100 tapitrisa amin'ity taona ity i Apple. Tamin'ny taon-dasa 2020, namokatra fitaovana 75 tapitrisa ilay orinasa, noho izany dia ilaina ny manarona farafaharatsiny izany vola izany ary noho izany Apple koa dia manampy 25 tapitrisa bebe kokoa amin'ny famokarana. Ny fizotry ny famokarana ataon'ireto processeur vaovao ireto dia 5 nm.
Ny tatitra izay hitantsika androany dia navoaka tao amin'ny tranonkala malaza MacRumors dia manondro fa ny puce manaraka dia hanasongadinana CPU enina-core miaraka amina core efatra mahomby avo lenta ary cores roa avo lenta. Toa hita ihany koa eo amin'ny efijery ny tahan'ny famelomana 120 Hz araka ny tsiliantsofina, azo ampiana izany ny efijery «Aseho mandrakariva» fakan-tsary aoriana tsara kokoa na farafaharatsiny fakan-tsary fakan-tsary hafa ary fanatsarana lehibe hafa amin'ity maodely ity izay tokony ho mpivarotra indrindra arak'ireo mpandinika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Baiko iray mihoatra ny 100 tapitrisa A15 Bionic chips ho an'ny iPhone 13
Titanium Alloy ho an'ny iPhone 14 Pro Chassis